ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တာနဲ့ အနုပညာရှင်လို့ သတ်မှတ်ကြတာ တော်တော် နှမြောစရာ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာဦးမောင်မောင်မြင့် | Popular
ငယ္စဥ္ကတည္းက အႏုညာေတြနဲ႔ပဲ ဘဝကိုအခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရတဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္တစ္ေယာက္ကေတာ့ အသက္အ ရြယ္ႀကီးရင့္လာတဲ့အထိ ကိုယ္ျမတ္နိုးတဲ့အႏုပညာကို မစြန္႔လႊတ္နိုင္ေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ အရင္အႏုပညာေလာကမွာ အႏုပညာသမားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ႀကိဳးစားခဲ့ရေပမယ့္ ယခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြေပၚမွာ ေပၚျပဴလာျဖစ္လာတာနဲ႔ အႏုပညာရွင္လို႔ သတ္မွတ္ၾကတဲ့အေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ႏွေျမာစရာေကာင္းတယ္လို႔ ဒါရိုက္တာ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က . . .
ေရွးေခတ္ကဆို ေျမႀကီးမွာအပင္ဆိုတာ ဒုတ္ဆိုၿပီးခ်က္ခ်င္းသြားစိုက္လို႔ မရဘူး။ ႐ုပ္ရွင္ပညာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္ေထာင့္က ပညာရပ္ကိုပဲၾကည့္ၾကည့္ အစကေနစၿပီးေတာ့ ပ်ိဳးရတာေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီဥစၥာကို ေတာ္စြ၊ေရာ္စြေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ ဟာသေတြနဲ႔ ဆိုရွယ္မီဒီယာေဖ့ဘုတ္စ္ကေနၿပီးေတာ့ ဟိုလူသိ၊ ဒီလူသိသိလာတဲ့သူေတြက ဘဘတို႔ကိုအ ထင္မႀကီးေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒီအတြက္ကေတာ့ဝမ္းနည္းမိတယ္။ တကယ္ကေတာ့ မဟုတ္ဘူး။တကယ္က ဒီလူေတြမွာမွ ပညာအိုေတြကရွိတာ။ အသစ္ေတြမွာ ပညာအိုတစ္ေယာက္မွမရွိဘူး။ အဲ့ဒါကို တန္ဖိုးမထားတတ္တဲ့အတြက္ စိတ္မ ေကာင္းဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ အႏုပညာနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေပးရေတာ့ တစ္စက္မွ ႏွေျမာျခင္း မရွိဘူး။ တစ္စက္မွ ပင္ပန္းျခင္းလည္း မရွိဘူး။ ပိုက္ဆံမတတ္နိုင္ပါဘူးဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ့ မဂၤလာ ေဆာင္ေလးကို ခ်ီးျမႇင့္ပါ ညက်လို႔ရွိရင္အၿငိမ့္ ေလးတစ္ခုေလာက္ကျပပါဦးဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေပးတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ႏွေျမာ တယ္ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရင္ထဲကမပါဘဲ နဲ႔ လုပ္လို႔ေတာ့မရဘူး။ ဒါကိုေပးလိုက္ရတာ ပိုက္ဆံနဲ႔ေပးဝယ္လို႔မရဘူး။ အဲ့ဒါကို တန္ဖိုးမ ထားတတ္လို႔ တန္ဖိုးမထားခဲ့ရင္ အရမ္းႏွေျမာ တယ္။ ရိုးရိုးႏွေျမာတာထက္ကို ပိုႏွေျမာမိ တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
၅ႏွစ္မွာတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္တဲ့ယခု ေရြးေကာက္ ပြဲမွာ ဒီမိုကေရစီအစစ္ရရွိသြားၿပီလို႔ ယူဆတဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္က ဒီတစ္ေခါက္ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ အရမ္း ကိုအားရတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုပါ။ဒီမိုကေရစီဆိုတာက အားလုံးသည္ တန္းတူညီမၽွျဖစ္ရမယ္။စားအတူ၊ သြားအတူ၊ အလုပ္လုပ္လည္း အတူ၊ စိတ္တူညီမၽွ အကုန္ျဖစ္ေနရမယ္။လူသားအခ်င္း ခ်င္း ညီတူညီမၽွဆက္ဆံၿပီးအေကာင္းဆုံး နိုင္ငံ ေတာ္အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ျဖည့္ ဆည္းေပးၾကရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်စ္တဲ့ ျမန္မာ နိုင္ငံဟာ ဘာမွေျပာစရာမရွိေအာင္လွပေနမွာပါလို႔ေျပာပါတယ္။
ငယ်စဉ်ကတည်းက အနုညာတွေနဲ့ပဲ ဘဝကိုအချိန်ကုန်ခဲ့ရတဲ့ ဦးမောင်မောင်မြင့်တစ်ယောက်ကတော့ အသက်အ ရွယ်ကြီးရင့်လာတဲ့အထိ ကိုယ်မြတ်နိုးတဲ့အနုပညာကို မစွန့်လွှတ်နိုင်သေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အရင်အနုပညာလောကမှာ အနုပညာသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ တော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရပေမယ့် ယခုချိန်မှာတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာတာနဲ့ အနုပညာရှင်လို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့အပေါ်မှာ တော်တော်နှမြောစရာကောင်းတယ်လို့ ဒါရိုက်တာ၊ သရုပ်ဆောင် ဦးမောင်မောင်မြင့်က . . .
ရှေးခေတ်ကဆို မြေကြီးမှာအပင်ဆိုတာ ဒုတ်ဆိုပြီးချက်ချင်းသွားစိုက်လို့ မရဘူး။ ရုပ်ရှင်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်ထောင့်က ပညာရပ်ကိုပဲကြည့်ကြည့် အစကနေစပြီးတော့ ပျိုးရတာပေါ့နော်။ အဲ့ဒီဥစ္စာကို တော်စွ၊ရော်စွတွေ လုပ်ပြီးတော့ ဟာသတွေနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာဖေ့ဘုတ်စ်ကနေပြီးတော့ ဟိုလူသိ၊ ဒီလူသိသိလာတဲ့သူတွေက ဘဘတို့ကိုအ ထင်မကြီးတော့ဘူး။ အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ဝမ်းနည်းမိတယ်။ တကယ်ကတော့ မဟုတ်ဘူး။တကယ်က ဒီလူတွေမှာမှ ပညာအိုတွေကရှိတာ။ အသစ်တွေမှာ ပညာအိုတစ်ယောက်မှမရှိဘူး။ အဲ့ဒါကို တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့အတွက် စိတ်မ ကောင်းဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနုပညာနဲ့ လုပ်ကိုင်ပေးရတော့ တစ်စက်မှ နှမြောခြင်း မရှိဘူး။ တစ်စက်မှ ပင်ပန်းခြင်းလည်း မရှိဘူး။ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ ကျွန်မတို့ရဲ့ မင်္ဂလာ ဆောင်လေးကို ချီးမြှင့်ပါ ညကျလို့ရှိရင်အငြိမ့် လေးတစ်ခုလောက်ကပြပါဦးဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ ကပေးတယ်။ အဲ့ဒီတော့နှမြော တယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့က ရင်ထဲကမပါဘဲ နဲ့ လုပ်လို့တော့မရဘူး။ ဒါကိုပေးလိုက်ရတာ ပိုက်ဆံနဲ့ပေးဝယ်လို့မရဘူး။ အဲ့ဒါကို တန်ဖိုးမ ထားတတ်လို့ တန်ဖိုးမထားခဲ့ရင် အရမ်းနှမြော တယ်။ ရိုးရိုးနှမြောတာထက်ကို ပိုနှမြောမိ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
၅နှစ်မှာတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ယခု ရွေးကောက် ပွဲမှာ ဒီမိုကရေစီအစစ်ရရှိသွားပြီလို့ ယူဆတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ဦးမောင်မောင်မြင့်က ဒီတစ်ခေါက်ရွေးကောက်ပွဲကတော့ အရမ်း ကိုအားရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုပါ။ဒီမိုကရေစီဆိုတာက အားလုံးသည် တန်းတူညီမျှဖြစ်ရမယ်။စားအတူ၊ သွားအတူ၊ အလုပ်လုပ်လည်း အတူ၊ စိတ်တူညီမျှ အကုန်ဖြစ်နေရမယ်။လူသားအချင်း ချင်း ညီတူညီမျှဆက်ဆံပြီးအကောင်းဆုံး နိုင်ငံ တော်အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ဖြည့် ဆည်းပေးကြရင် ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံဟာ ဘာမှပြောစရာမရှိအောင်လှပနေမှာပါလို့ပြောပါတယ်။